थप जोखिमको आँकलन : किन पर्यो आन्तरिक उडान सहितका तीनवटा सेवा खोल्न हतारो ? – Mission Khabar
थप जोखिमको आँकलन : किन पर्यो आन्तरिक उडान सहितका तीनवटा सेवा खोल्न हतारो ?
मिसन खबर ३१ भाद्र २०७७, बुधबार ०६:३४
काठमाडौं । अन्तरिक हवाई उडान, लामो दुरीको यातायात सेवा र होटल रेष्टुरेन्टहरु असोज १ गतेबाट खुला हुने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै अन्तरिक हवाई उडान सुरु गर्न, यातायात सञ्चालन तथा होटल रेस्टुरेन्ट खोल्न अनुमति दिएसँगै असोज १ बाट तीनवटै सेवा सञ्चालनमा आउने भएका हुन् ।
उडानका क्रममा विमानमा सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्नुपर्नेछ भने मास्क, भाइजरको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै यातायात सञ्चालन गर्न समेत छुट दिएको छ । यसरी स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल गरेर लामो दुरीको यातायात सञ्चालन गर्दा साविकको भाडादरमा ५० प्रतिशत बढाएर लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जोखिम बढेको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले आवश्यक निर्णय लिन सक्नेछ । बसको एक लहरको सिटमा एक जना मात्र बस्न पाइनेछ । यसअघि नै व्यवसायीहरुले असोज १ बाट सरकाले यातायात सेवा खोज्न निर्णय नगरे जबर्जती गाडी चलाउने चेतावनी दिदै आएका थिए । समेत यस्तै सरकारले भौतिक दूरी कायम गराएर तथा आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी सहित होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न समेत छुट दिएको छ ।
लामो समयको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण रोगभन्दा भोगले मर्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै पूर्णरुपमा निषेधाज्ञा खोल्न व्यवसायीहरुले आन्दोलन सहितका दबाबमुलक अधियान सुरु गरेका छन् । नेपालमा दोश्रो कोरोना संक्रमित पहिचान भएसँगै संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै गरिएको चैत ११ को लकडाउनपछि आन्तरिक उडान, लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात र होटल रेस्टुरेन्ट बन्द अवस्थामा छन् ।
यस्तो छ कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था
पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ४५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै मंगलबार साँझसम्म नै कुल कोरोना संक्रमितको संख्या ५६ हजार ७८८ पुगेको छ । काठमाडौं जिल्लाका मात्र ५५५ जना, भक्तपुरका ८६ र ललितपुरका ३५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । कोरोना जित्नेको संख्या ४० हजार ६३८ पुग्दा अझै देशभरमा १५ हजार ७७९ जना सक्रिय संक्रमित छन् । संक्रमित मध्ये ३७१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
देशका बढी जनघनत्व भएका शहरहरुमा संक्रमण र मृत्युदर उच्च छ । तर सरकारले आन्तरिक उडान, यातायात, होटल रेस्टुरेन्ट सबै खोल्न छुट दिएर जोखिम बढाएको छ ।
ट्याग : #breaking, #अन्तरिक हवाई उडान, #यातायात सञ्चालन, #यातायात सेवा, #व्यवसायी, #स्थानीय प्रशासन, #होटल तथा रेस्टुरेन्ट